नेपाल नादेझ्दा कपको फाइनलमा
नेपाली राष्ट्रिय महिला फुबल टोली किर्गिस्तानमा जारी नादेझ्दा कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार भएको लिगको अन्तिम खेलमा ताजिकिस्तानलाई १-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो।
प्रकाशित: २०७६-०५-२४ १४:०३:५३ नेपाल समय
काठमाडौं- नेपाली राष्ट्रिय महिला फुबल टोली किर्गिस्तानमा जारी नादेझ्दा कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार भएको लिगको अन्तिम खेलमा ताजिकिस्तानलाई १-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो।
नेपाललाई जित दिलाउन खेलकोग एक मात्र गोल स्टार स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले गरिन्। पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरी भएको खेलको दोस्रो हाफमा सावित्राले गोल गरेकी हुन्। उनले खेलको ८६ औँ मिनेटमा गोल गर्दै नेपाललाई फाइनलमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण योगदन दिइन्।
नेपालले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरे पनि रेफ्रीले त्यसलाई अफसाइडको इसार गर्दै मान्यता दिएनन्। नेपालले यसअघिको एक खेलमा जित निकाल्न सफल भएको थियो भने एक खेलमा हार व्यहोरेको थियो।
नेपाल पहिलो खेलमा घरेलु टिम किर्गीस्तानसँग ८-२ गोलले विजयी हुँदा दोस्रो खेलमा भने नेपाल उज्वेकिस्तानसँग २-० ले पराजित भएको थियो। अब नेपालले उपाधिका लागि उज्बेकिस्तानको सामना गर्ने छ। उज्बेकिस्तानले यसअघि नै प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाइ सकेको छ।
लयमा फर्किंदै म्यानचेस्टर सिटी
अहमदाबादमा बन्यो विश्वकै ठूलो क्रिकेट रंगशाला, यस्ता छन् विशेषता
प्रथम प्रदेशस्तरीय खुल्ला पुरुष भलिबल सुरु
मेस्सी र रोनाल्डोलाई पनि पछि पार्ने को हुन् हालान्ड ?
नयाँ बानेश्वर चोकमा आकाशेपुल निर्माण अघि बढ्यो
मन्त्री–एजेन्ट संवाद प्रकरणः के भयो दिनभर ?
विरोध प्रदर्शनमा हस्तक्षेप भएकोमा कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण
१ नयाँ बानेश्वर चोकमा आकाशेपुल निर्माण अघि बढ्यो
२ मन्त्री–एजेन्ट संवाद प्रकरणः के भयो दिनभर ?
३ विरोध प्रदर्शनमा हस्तक्षेप भएकोमा कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण
४ सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री खतिवडालाई
५ एनआईसी एसिया बैंकको न्यू चमत्कारिक बचत खाता योजना